Alarobia 12 Jiona 2019. – FJKM
Alarobia 12 Jiona 2019.
Asan’ny Apostoly 16.1-15
Zava-baovao 3 no hitantsika eto:
1-Fandrarana vaovao :
Tena mahagaga antsika ny mamaky hoe: « noraran’ny Fanahy Masina tsy hitory teny » (and 6) sy « tsy navelan’ ny Fanahin’i Jesoa handeha » hitory tany Bytinia ry i Paoly . Olona handeha hanao tafika masina ve dia horarana ? Eny , izany no mampianatra antsika fa ny Fanahy Masina no lehiben’ny tafika masina . Mahay mankato Azy ve isika ?
Ity fiampitana nanakany Makedonia ity (and10) no nanamarika ny fidiaran’ny Filazantsara tany Eropa izay nanjary foiben’ny fiangonana kristiana taty aoriana . Tena fiitaran’ny ambaindain’ny Filazantsara izany ;
Olona vaovao roa no hitantsika eto , dia i Timoty (and1-3) sy i Lydia (and14-15). I Timoty dia fantatsika amin’ ny fisian’ny Epistily roa nosoratan’i Paoly ho azy , fa tonga mpiara-miasa akaiky tamin’i Paoly ary lasa mpitondra fiangonana mihitsy aza. I Lydia indray dia voalaza hoe: « ny Tompo nanokatra ny fony hitandrina ny teny » (and14) ary dia nahazo ny satroboninahitry ny vehivavy Eropeana kristiana voalohany . Ary mahafaly fa tsy izy irery fa izy sy ny ankohonany (and15).